Felitere ọnụahịa nke nsụgharị nke OnePlus 6 | Gam akporosis
Izu ndị a, ọnụọgụ banyere OnePlus 6 na-aba ụba. Ọgwụgwụ ọhụrụ nke akara ngosi ndị China ga-abata na ahịa n'oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na anyị amabeghị ụbọchị mmalite ya. Ma, n’ime izu ndị gara aga, anyị amụtala nkọwa ndị ọzọ, dịka akụkụ nke atụmatụ ya, nke ga-agụnye ọkwa ahụ. Ugbu a ọnụahịa nke ụdị atọ ahụ ga-esite na njedebe dị elu edozila.
Ka ọ dị na mbụ, Onye OnePlus 6 ga - akụ ahịa ahụ na nchịkọta dị iche iche nke RAM na nchekwa dị n’ime. Ya mere ndị ọrụ ga-enwe nhọrọ ịhọrọ site na nkasi obi zuru oke. Anyị amatakwala ahịa ha.
Na mmalite ya, OnePlus bụ akara nke dọtara uche maka ịbụ onye dị ọnụ ala karịa karịa ndị ya na ya na-azọ. Ọnụ ekwentị ọ bụla na-arị elu. Ihe a na-atụ anya na ọ ga-eme n'afọ a na OnePlus 6, nke E kwuru na ọ ga-abụ nke kachasị ọnụ ruo ugbu a. Ọnụahịa ahụ dị adị, ọ bụ ezie na ọ ka na-ahụkarị dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ dị elu.
Ndị a bụ ndị ahịa na e leaked ọ bụla nke nsụgharị nke ekwentị:
OnePlus 6 nwere 64GB nchekwa: 3299 yuan (ihe dị ka euro 425)
OnePlus 6 128GB: 3799 yuan (ihe dị ka euro 490)
OnePlus 6 256GB ọnụahịa: Yuan 4399 (ihe dị ka euro 565)
Ihe kachasị dịrị nchebe bụ na mgbe ngwaọrụ ahụ ruru Spain, ọnụahịa nke nsụgharị atọ ahụ ga-adịtụ elu. Ndị a bụ ego iji gbanwee ekwentị, mana n'ozuzu ha na-adị oke ọnụ. N'ihi ya, ndị kasị oké ọnụ version nke ekwentị nwere ike nwere a price nke ihe 600 euro. Ihe dabara adaba na izu ole na ole gara aga.
Ihe a na-atụ anya maka ekwentị OnePlus na-arị elu. Agbanyeghị na onye nrụpụta China ekpugabeghị ụbọchị ntinye ya. A na-eme ya na June, mana anyị nwere olile anya ịnweta nkwenye site na ụlọ ọrụ ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Filters ọnụahịa nke nsụgharị atọ nke OnePlus 6
Ka ọnụahịa bidoro ịfụ dị ka Xiaomi maka ịnọ na Spen, ụdị abụọ a ga-efunahụ ahịa. Ezi ihe enwere nhọrọ ndị ọzọ.